TQ brother Maung Maung and all the friends in Malaysia and Myanmar | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Prince Charles- Follow Islamic ‘spiritual principles’ to save the World
Myanmar Muslims: ‘We’re citizens too’ – BBC News »
This entry was posted on November 7, 2019 at 6:44 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
2 Responses to “TQ brother Maung Maung and all the friends in Malaysia and Myanmar”
November 7, 2019 at 7:13 am | Reply
Thu Rain Tun
ကိုယ့်ကိုကူညီဖို့ မိတ်ဆွေကောင်းတစ်ယောက်ရောက်လာတော့ တော်သေးတာပေါ့..
November 10, 2019 at 8:22 am | Reply
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဟာ မိမိချစ်မြတ်နိုးတော်မူဆုံးသောသူတွေကို စမ်းသပ်တော်မူတယ်။
ကိုယ့်သွေးရင်းသားရင်းထဲကသူတွေ ကိုယ့်ကို နာကျင်စေတယ်ဆို ညီအစ်ကိုအရင်းအချာတွေကိုယ်တိုင်ရဲ့ ရက်စက်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ တမန်တော် ယူစွဖ် အလိုင်းဟစ္စလာမ်ကို သတိရပါ။
ကိုယ့်မိဘကိုယ်တိုင်က ကိုယ့်ကို ပစ်ပယ်ခြင်းခံရတယ်ဆို အလျှံညီးညီး တောက်လောင်နေတဲ့ မီးပုံထဲအထိ ပစ်ချခြင်းခံရသည့်တိုင်အောင် ဖခင်ရဲ့ ပစ်ပယ်ခြင်းခံရတဲ့ တမန်တော် အီဗရာဟီးမ် အလိုင်းဟစ္စလာမ်ကို သတိရပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူက ကိုယ့်ကို ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းအောင်၊ စိတ်ဆင်းရဲအောင် ပြုမူခံနေရတယ်ဆို ဇနီးသည်ရဲ့ ဒုက္ခပေးခြင်းခံရတဲ့ တမန်တော် လူးသွ် အလိုင်းဟစ္စလာမ်ကို သတိရပါ။
ပြသနာ တစ်စုံတစ်ရာထဲမှာ လွတ်မြောက်ဖို့ လမ်းစပါ ရှာမတွေ့ဖြစ်နေရတယ်ဆို ဝေလငါးကြီးရဲ့ ၀မ်းဗိုက်ထဲမှာ မလူးသာမလွန့်သာဖြစ်သည့်အထိ လမ်းပျောက်နေခဲ့ရတဲ့ တမန်တော် ယူနွတ်စ် အလိုင်းဟစ္စလာမ်ကို သတိရပါ။
ကိုယ့်မှာ ကျန်းမာရေးကြောင့် ဝေဒနာခံစားနေရတယ်ဆို နှုတ်လျှာကလွဲပြီး ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ဝေဒနာတွေ ခံစားခဲ့ရတဲ့ တမန်တော် အိုင်ယူးဗ် အလိုင်းဟစ္စလာမ်ကို သတိရပါ။
တခါတလေ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်မှာ ပန်းတိုင်ပျောက်ပြီး Logic ရှာမတွေ့တော့ဘူးဆို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ရဲ့ အမိန့်တော်နှင့် ဘာ Logic မျှ မမေးမြန်းဘဲ သင်္ဘောကြီးတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ တမန်တော် နူးဟ် အလိုင်းဟစ္စလာမ်ကို သတိရပါ။
ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေ စိတ်ဒုက္ခပေးလို့ စိတ်ထိခိုက်နေတယ်ဆို နောက်ဆုံးအချိန်အထိ သားအတွက် ရတက်ပွေခဲ့ရတဲ့ တမန်တော် နူးဟ် အလိုင်းဟစ္စလာမ်ကို သတိရပါ။
ကိုယ့်ဆွေမျိုးသားချင်း၊ အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေ အပါအ၀င် လူအများက ကိုယ့်ကိုဆန့်ကျင်နေကြတယ်ဆို အစ္စလာမ်ဘာသာဘက်ကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့လို့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့ ဆန့်ကျင်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျေးဇူးတော်ရှင် နောက်ဆုံးတမန်တော်ချုပ် မိုဟမ္မဒ် صلى الله عليه وسلم ကို သတိရပါ။
လူအများရဲ့ မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံပြောဆိုတာ ခံနေရတယ်ဆို မိခင်မွန်ကြီး အာအေရှာ رضي الله عنها သခင်မကြီးကို တစ်မြို့လုံး မတရားလုပ်ကြံပြောဆိုခြင်း ခံခဲ့ရတာကို သတိရပါ။
တမန်တော်မြတ် صلى الله عليه وسلم မိန့်ကြားတော်မူခဲ့တယ်…. ကြီးကျယ်လှစွာသော အကျိုးကုသိုလ်ဟာ ကြီးကျယ်တဲ့ စမ်းသပ်မှုတွေကနေ ရရှိကြတာဖြစ်တယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ချစ်မြတ်နိုးတော်မူပြီဆို အဲဒီသူကို စမ်းသပ်တော်မူတယ်။ မည်သူမဆို အရှင်မြတ်ရဲ့ စမ်းသပ်မှုအပေါ် ကျေနပ်လိုက်တယ်ဆိုလျင် အဲဒီသူကို အရှင်မြတ်က နှစ်သက်တော်မူမယ်။ မည်သူမဆို အရှင်မြတ်ရဲ့ စမ်းသပ်မှုအပေါ် စောဒကတက်မလဲ အဲဒီသူကို အရှင်မြတ် နှစ်မြို့တော်မူခြင်း မရှိဘူး။
အလ်လာဟျအရှငျမွတျဟာ မိမိခဈြမွတျနိုးတျောမူဆုံးသောသူတှကေို စမျးသပျတျောမူတယျ။
ကိုယျ့သှေးရငျးသားရငျးထဲကသူတှေ ကိုယျ့ကို နာကငျြစတေယျဆို ညီအဈကိုအရငျးအခြာတှကေိုယျတိုငျရဲ့ ရကျစကျခွငျးခံခဲ့ရတဲ့ တမနျတျော ယူစှဖျ အလိုငျးဟစ်စလာမျကို သတိရပါ။
ကိုယျ့မိဘကိုယျတိုငျက ကိုယျ့ကို ပဈပယျခွငျးခံရတယျဆို အလြှံညီးညီး တောကျလောငျနတေဲ့ မီးပုံထဲအထိ ပဈခခြွငျးခံရသညျ့တိုငျအောငျ ဖခငျရဲ့ ပဈပယျခွငျးခံရတဲ့ တမနျတျော အီဗရာဟီးမျ အလိုငျးဟစ်စလာမျကို သတိရပါ။
ကိုယျ့ရဲ့ ဇနီးဖွဈသူက ကိုယျ့ကို ဂုဏျသိက်ခာကဆြငျးအောငျ၊ စိတျဆငျးရဲအောငျ ပွုမူခံနရေတယျဆို ဇနီးသညျရဲ့ ဒုက်ခပေးခွငျးခံရတဲ့ တမနျတျော လူးသျှ အလိုငျးဟစ်စလာမျကို သတိရပါ။
ပွသနာ တဈစုံတဈရာထဲမှာ လှတျမွောကျဖို့ လမျးစပါ ရှာမတှဖွေ့ဈနရေတယျဆို ဝလေငါးကွီးရဲ့ ၀မျးဗိုကျထဲမှာ မလူးသာမလှနျ့သာဖွဈသညျ့အထိ လမျးပြောကျနခေဲ့ရတဲ့ တမနျတျော ယူနှတျဈ အလိုငျးဟစ်စလာမျကို သတိရပါ။
ကိုယျ့မှာ ကနျြးမာရေးကွောငျ့ ဝဒေနာခံစားနရေတယျဆို နှုတျလြှာကလှဲပွီး ခန်ဓာကိုယျတဈခုလုံး ဝဒေနာတှေ ခံစားခဲ့ရတဲ့ တမနျတျော အိုငျယူးဗျ အလိုငျးဟစ်စလာမျကို သတိရပါ။
တခါတလေ ကိုယျလုပျနတေဲ့ အလုပျမှာ ပနျးတိုငျပြောကျပွီး Logic ရှာမတှတေ့ော့ဘူးဆို အလ်လာဟျအရှငျမွတျရဲ့ အမိနျ့တျောနှငျ့ ဘာ Logic မြှ မမေးမွနျးဘဲ သင်ျဘောကွီးတညျဆောကျခဲ့တဲ့ တမနျတျော နူးဟျ အလိုငျးဟစ်စလာမျကို သတိရပါ။
ကိုယျ့ရဲ့သားသမီးတှေ စိတျဒုက်ခပေးလို့ စိတျထိခိုကျနတေယျဆို နောကျဆုံးအခြိနျအထိ သားအတှကျ ရတကျပှခေဲ့ရတဲ့ တမနျတျော နူးဟျ အလိုငျးဟစ်စလာမျကို သတိရပါ။
ကိုယျ့ဆှမြေိုးသားခငျြး၊ အပေါငျးအသငျးမိတျဆှေ အပါအ၀ငျ လူအမြားက ကိုယျ့ကိုဆနျ့ကငျြနကွေတယျဆို အစ်စလာမျဘာသာဘကျကို ဖိတျချေါခဲ့လို့ ဆှမြေိုးသားခငျြးတှေ၊ မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးတှရေဲ့ ဆနျ့ကငျြခွငျးခံခဲ့ရတဲ့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ကြေးဇူးတျောရှငျ နောကျဆုံးတမနျတျောခြုပျ မိုဟမ်မဒျ صلى الله عليه وسلم ကို သတိရပါ။
လူအမြားရဲ့ မဟုတျမမှနျ လုပျကွံပွောဆိုတာ ခံနရေတယျဆို မိခငျမှနျကွီး အာအရှော رضي الله عنها သခငျမကွီးကို တဈမွို့လုံး မတရားလုပျကွံပွောဆိုခွငျး ခံခဲ့ရတာကို သတိရပါ။
တမနျတျောမွတျ صلى الله عليه وسلم မိနျ့ကွားတျောမူခဲ့တယျ…. ကွီးကယျြလှစှာသော အကြိုးကုသိုလျဟာ ကွီးကယျြတဲ့ စမျးသပျမှုတှကေနေ ရရှိကွတာဖွဈတယျ။ တဈစုံတဈယောကျကို အလ်လာဟျအရှငျမွတျ ခဈြမွတျနိုးတျောမူပွီဆို အဲဒီသူကို စမျးသပျတျောမူတယျ။ မညျသူမဆို အရှငျမွတျရဲ့ စမျးသပျမှုအပျေါ ကနြေပျလိုကျတယျဆိုလငျြ အဲဒီသူကို အရှငျမွတျက နှဈသကျတျောမူမယျ။ မညျသူမဆို အရှငျမွတျရဲ့ စမျးသပျမှုအပျေါ စောဒကတကျမလဲ အဲဒီသူကို အရှငျမွတျ နှဈမွို့တျောမူခွငျး မရှိဘူး။